April 2021 – Page2– BaHuTuTa
စားသောက်ဆိုင်မှာ သွားစားတိုင်း ဉာဏ်ရှိရှိ ရွေးစားတတ်စေရန်
စားသောက်ဆိုင်က အမြန်စာ ( Fast Food ) တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်နေပါသလား။ မြန်မြန်ရပြီး အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာဆိုတာ မရှိနိုင်ဘူးလို့ သိထားပါသလား။ အဲဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အမြန်စာရောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ […]
ပိုက်ဆံဝင်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အလုပ်လုပ်တာ တခုတည်းနဲ့မပြီးပါ။ ပိုက်ဆံကိုစိတ်ချမ်းသာအောင် ထားဖို့လိုပါတယ်။ ပိုက်ဆံက နေ့တိုင်းလိုလို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ ထွက်သွားလိုက် ဝင်လာလိုက် ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။ ဘာလုပ်ရဦးမှာလဲ။ ဘာလုပ်ဖို့လိုသေးတာလဲ။ သူဌေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် ကို ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပါရစေ။ ၀၁. ပိုက်ဆံအိတ်အရှည်ကို သုံးပါ။ ပိုက်ဆံအိတ်အရှည်ကိုသုံးဖို့ အကြံပြုတာကတော့ ပိုက်ဆံကိုတွေကို စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်းမှာ […]
အသက် ၃၀ မှာ စတင်ထားရင် အသက် ၅၀ မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေမယ့် အရာများ
အသက် ၅၀ အရွယ် လူတွေကို ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိသလဲမေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အဖြေတွေက သိပ်ကို ကောင်းမွန်ပြီး ရိုးရှင်းလှပါတယ်။ ကိုယ့် အသကိ ၃၀ တနိးကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဒီ အလုပ် တွေကို လုပ်သင့်ပါပြီ။ ၁. ဆေးလိပ် မသောက်နဲ့။ သောက်မိပြီဆိုရင် ဖြတ်ပစ်ပါ။ ၂. […]
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ရက်လောက် ရေမချိုးဘဲ နေလိုက်ရတာမျိုးကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ရက်လောက် ရေမချိုးမိလိုက်ရင်တော့ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က သေချာပေါက် အနံ့အသက်တစ်ခုခု ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ရက်လောက် ရေမချိုးလိုက်ဘဲ နေလိုက်ခြင်းဟာ ကြီးမားတဲ့ စွန့်စားမှုတစ်ခုလို့ ဆရာဝန်တွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ရေနှစ်ရက်လောက် မချိုးလိုက်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆိုးကျိုးပေးတဲ့ […]
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Technopark ကုမ္ပဏီမှ၊ IT နည်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Mr. Varun ရဲ့ရောဂါက ထူးဆန်းနေပါတယ်။ သူဟာတနေ့လုံးနေကောင်းပြီး၊ ညရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဗိုက်ထဲကရစ်ရစ်နာ တဲ့ဝေဒ နာကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို ဝေဒနာစွဲနေ တာ နှစ်နဲ့ချီနေပါပြီတဲ့။ ဆရာ ဝန်တွေနဲ့စမ်းသပ်ပြီး သာမန်ဆေးစစ်ချက်လေးတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ရောဂါ ရှာမရ […]
1. သူ့မိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို မေးပါ သူ့ရဲ့မိသားစုအသိုင်းဝိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို သေချာသိအောင်မေးထားပါ။ မတော်လို့ကိုယ်ကသူ့မိသားစုအသိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါ သူတို့ဆက်ဆံရေးကို မသိပဲအပြောဆိုမတတ်တာမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ရင်မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့်သေချာမေးထားပြီးသူနဲ့သူ့မိသားစုဆက်ဆံရေးကိုသိပါစေ။ 2. ကိုယ်နဲ့ဘာအကြောင်းအရာမျိုးတွေဆွေနွေးပြောဆိုဖို့သူခက်ခဲတတ်သလဲမေးပါ ကိုယ်နဲ့သူဘာအကြောင်းအရာမျိုးတွေပြောဆိုဖို့ကိုသူဝန်လေးတတ်လည်းဆိုတာ မျိုးကိုသိအောင်လုပ်ထားပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးထားပါ။ ဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုမသိထားဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းပိုပြီးအဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ 3. ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးသူ့စိတ်ထဲဘယ်အရာတွေကိုဂုဏ်ယူလဲဆိုတာမေးပါ ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးသူ့စိတ်ထဲကဘယ်အရာတွေကိုသဘောကျလဲဆိုတာမျိုးကိုမေးထားပါ။ ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးသူကြိုက်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ်တိုင်သိထားရင်ဆက်ဆံရေးပိုပြီး ပြေလည်အေးချမ်းစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ သင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘာအကြောင်းအရာကြောင့်သင်နောက်ဆုံးငိုခဲ့ရလည်းဆိုတာမျိုးပါ၊ သင့်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုသူ့ကြောင့်သင်နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုမှတ်မိနေမှာပါ။ 5. […]
တစ်နေ့တာအလုပ်တွေပြီးဆုံးသွားရင် ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်စက်ရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ညဘက်ကောင်းကောင်းမအိပ်ရရင် မနက်ကျ အိပ်ရေးကမဝရတဲ့ကြားထဲစောစောထရ၊စောစောထရတော့စိတ်တွေကမလန်းဆန်း၊စိတ်တွေတိုနဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တစ်ညလုံးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့ဆိုတာညအိပ်ရာမဝင်ခင်ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစားအစာနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတယ်တဲ့။အခု Buzzy ပရိသတ်ကြီးအတွက် ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားစေဖို့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကို ပြန်ပြီးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေကတော့… အသင့်စားအစားအစာများ အသင့်စားအစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ အာလူးကြော်၊ဟမ်ဘာဂါ၊ပီဇာစတာတွေက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန် စားမိရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ဒီလိုအသင့်စားအစားအစာတွေမှာပါတဲ့အသားချောင်းတွေ၊အာလူးကြော်တွေမှာ အငန်ဓာတ်အဆီဓာတ်များပြားတဲ့အတွက်အစာအိမ်အတွက်မကောင်းစေပါတယ်။ဒါတွေစားမိတဲ့အခါရင်ပူရင်ဆာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါဆို ညဘက်လည်းနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဝိုင် အိပ်ခါနီးဝိုင်ကိုတစ်ခွက်ထက်ပိုသောက်မိတဲ့အခါ ညလယ်ခေါင်ကြီးနိုးလာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဝိုင်ဟာလည်း အရက်ယမကာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တာကြောင့် ဟောက်သံအကျယ်ကြီးထွက်စေပါတယ်။ ချောကလက်အမည်း […]
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ချုံကင်းမြို့က လီဟီလီဒူတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ဟာ လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကို သံလှောင်အိမ်တပ်ထားတဲ့ကားနဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံအနှံ့လိုက်ပို့ပေးဖို့ ကြိုတင်မှာကြားမှုတွေ တော်တော်များများရရှိနေပါတယ်။ သံလှောင်အိမ်ထဲက လာရောက်လေ့လာသူတွေဟာ ကြက်အရှင်တွေကိုသုံးပြီး ဘင်္ဂလားကျားတွေ၊ ကျားဖြူတွေနဲ့ ဝက်ဝံတွေကို မြူဆွယ်နိုင်ပြီး အနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သံလှောင်အိမ်ထဲကနေပြီးတော့လည်း သတ္တိရှိတဲ့ဧည့်သည်တွေက ခြင်္သေ့တွေ၊ ကျားတွေကို အပေါက်လေးတွေထဲကနေ အစာကျွေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတိရစ္ဆာန်ရုံကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်က […]
“ မျက်ခုံးလှုပ် ၊အသားလှုပ်ခြင်းတို့၏ နိမိတ်အဟော ”
“မျက််ခုံးလှုပ် ၊ အသားလှုပ်ခြင််းတို့၏ အဟော” အသားလှုပ်နိမိတ်ကျမ်း (၁) ငယ်ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရအံ့၊ ချစ်ခင်သော မိတ်ဆွေများနှင်တွေ့ရအံ့။ (၂) လက်ဝဲဦးခေါင်းလှုပ်မူ သတင်းကောင်းကြားရအံ့၊ အကြံအစည် အထမြောက်အံ့။ (၃) လက်ယာဦးခေါင်းလှုပ်မူ လာဘ်ရအံ့ံ။ (၄) လက်ယာအထက်မျက်ခုံးလှုပ်မူ လာဘ်ရအံ့။ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းနှင့် တွေ့ကြုံရအံ့။ (၅) လက်ဝဲအထက်မျက်ခုံးလှုပ်မူ […]
ဒီလိုအချက်တွေကသင့်နှလုံးမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောပြနေမှာပါ… 1. လက်မောင်းတစ်ခြမ်းအောင့်မယ် သင့်ရဲ့လက်မောင်တစ်ခြမ်းက တော်တော်လေးကို အောင့်ပြီးကိုက်ခဲနေတာမျိုးဖြစ်ရင် သေချာစစ်ဆေးသင့်ပါပြီ။ ဒီတိုင်းကိုက်လို့ခဲလို့အောင့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ သင့်နှလုံးမကောင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 2. ချောင်းတွေဆိုးတာမျိုး၊ချောင်းဆိုးရင်းမောပြီးသွေးပါတာမျိုး ချောင်းတွေမကြာခဏဆိုးတတ်ပြီး ချောင်းဆိုးတိုင်း အမောဖောက်သလို မောပန်းကာသွေးးပါတတ်ရင်တော့သတိထားသင့်ပါပြီ။ 3. ခြေထောက်လက်ထောက်တွေရောင်ရမ်းတာမျိုး ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေ ခြေချင်းဝတ်တွေဖောရောင်နေပြီး တင်းတင်း ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းနှလုံးမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ 4. သူများထက်ပိုပြီးစိတ်ပူပန်တာမျိုးစိတ်ညစ်တာမျိုးဖြစ်လွယ်တယ် စိတ်ပူပန်မှုတွေသောကတွေကိုသူများထက်ပိုပြီး လိုအပ်တာထက်ပိုခံစားတတ်ကြပါတယ်။ […]